TTSweet: April 2011
အန်တီဆွိတို့ သားအမိ ဧပြီ၁၆ရက်နေ့ ညနေ ဖလိုက်နဲ့ စင်္ကာပူ ကနေ ဆစ်ဒ်နီမြို့ကို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ ခရီး သွားခဲတဲ့ မဆွိတီဟာ လမ်းခရီးမှာ တစ်ခုခု အဆင်မပြေမှာကို ကြောက်ပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ သွားရတာပါ။ ကိုယ်တက်မဲ့ လေယာဉ်မှ ရှာတွေ့ပါ့မလား၊ အင်မီဂရေးရှင်းတွေမှာ အဆင်မှပြေပါ့မလား၊ ကပ်စတန်တွေမှာ ရစ်နေမလား အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆစ်ဒ်နီလေဆိပ်ကနေ ထွက်လို့ အပြင်မှာ စောင့်နေတဲ့ ဦးခြိမ့်ကို တွေ့တဲ့အထိ အစစအရာရာ ချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ။
တစ်ခုပဲ။ စင်္ကာပူလေဆိပ်မှာ Hand carry တွေ scan ဖြတ်အပြီး လေယာဉ်ပေါ်တက်ခါနီးမှာ ပတ်စ်ပို့စ်ကို စစ်ဖို့ပေးလိုက်တော့ သကောင့်သားက မြန်မာ ပတ်စ်ပို့စ်မှန်းလဲသိရော ရစ်ပါလေရောဗျာ။ ဟိုက အင်မီဂရေးရှင်း အရာရှိကတောင် ဘာမှမမေးပဲ အေးဆေး pass ပေးလိုက်တာကို သူက ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ၊ ဘာလုပ်ဖို့သွားမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ မေးရုံမက ဗီဇာ စတစ်ကာလေးကိုတောင် လေဆာလို ကရိယာတစ်ခုသုံးပြီး အနီးကပ်စစ်ကြည့်နေလို့ အတော်ကို စိတ်ပိန်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်စ်ပို့လဲ ပြန်ပေးရော တွေ့ရာလူ အားနာပြီး ကျေးဇူးတင်နေတတ်တဲ့ မဆွိတီဟာ ပတ်စ်ပို့ကို လက်ထဲက ဆွဲယူပြီး ပါးစပ်က Thank you လို့ထွက်တော့မလို့ဟာ စိတ်ထဲက ငါဘာလို့ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာလဲ ငါ့ကို သတ်သတ်ရစ်နေတဲ့သူဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးပြီး ထွက်ခဲ့တော့တယ်။
လေယာဉ်ကလဲ British Air Way ဆိုတော့ လေယာဉ်စောင့်နေကတည်းက တစ်စီးလုံး နှာခေါင်းရှည်ရှည် အသားဖြူစပ်စပ်တွေချည်း တွေ့နေရတယ်။ အေရှဆိုလို့ မဆွိတီတို့ သားအမိရယ်၊ တရုတ်တစ်ယောက်ရယ်ပဲ တွေ့တယ်။ အဖြူတွေကို ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာ ခုလို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြီး တွေ့ဖူးတာဆိုတော့ မဆွိတီစိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ပဲ ရုပ်ရှင်ထဲ ရောက်သွားသလိုကြီး ဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ရယ်ချင်နေတော့တယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့ မဂျူဂျူက ချမ်းလို့ တချိန်လုံး ဂျီကျပြီး တော်တော်နဲ့ မအိပ်ဘူးဗျာ။ ကိုယ်ခြုံထားတဲ့ စောင်ပါ ၂ထပ်ခြုံပေးတာတောင် မလောက်လို့၊ သူ့လက်ကလေးတွေကတော့ အေးနေတယ်။ မေမေ့လက်တွေက ဘယ်လိုလုပ်ထားလို့နွေးနေတာလဲ ဆိုလို့ သူ့လက်ကလေးတွေကို နွေးသွားအောင် မအေလက်နဲ့ အကြာကြီး ဆုတ်ထားလိုက်မှ မချောက အိပ်တော့တယ်။ မအိပ်ခင် ဂျူဂျူ နှာစေးချင်သလိုဖြစ်တယ်၊ လည်ချောင်းနာတယ်ဆိုလို့ လေယာဉ်မယ်ဆီက ပါရာစီတမောလေး တောင်းမိတာ မျိုးစုံမေးမြန်းပြီး နောက်ဆုံး ပနဒေါ တစ်ခြမ်းနဲ့ ရေနဲ့လာပေးတယ်။ သောက်လဲပြီးရော Flight incident ဆိုပြီး ၂မျက်နှာလောက်ရှိတဲ့ဖောင် တစ်စုံ ဖြည့်လိုက်ရပါရောလား။ဲဖြည့်ရတဲ့ ဖောင်နဲ့ သောက်ရတဲ့ ဆေးနဲ့ မတန်လိုက်ချက်တော့။
ဆစ်ဒနီ ရောက်ခါနီးတာ့ လေယာဉ်မောင်က ရောက်တော့မယ် ဆိုပြီး ကြော်ငြာနေတာ။ကြာနေပြီ။ ရှေ့က တီဗီမှာ ကြည့်လိုက်တော့ လေယာဉ်လမ်းကြောင်းက စက်ဝိုင်းလိုလေး တစ်ပတ်ပြန်ကွေ့နေတာ မြင်နေရတယ်။ ရာသီဥတုမကောင်းလို့ မဆင်းသေးတာနဲ့တူတယ်လို့ ထင်နေတာ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ နောက်မှ ဦခြိမ့်ပြောပြတာက ဆစ်ဒနီလေဆိပ်နားက အိမ်တွေက မနက် ၆ နာရီမတိုင်မီ လေယာဉ်ဆိုက်ရင် အိပ်မရဘူးဆိုပြီး ကွန်ပလိမ့် တက်ထားလို့ မနက် ၆ နာရီကျော်တဲ့ အထိ လေယာဉ်က စောင့်နေရတာပါတဲ့။ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်။
အဖြူတွေကို ကြည့်ရတာ အင်မတန် အေးအေး ဆေးဆေးတွေ များပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ် အေးအေးလူလူ သတင်းစာတွေ၊ စာအုပ်တွေ ဖတ်ကြတာ များတယ်။ စလုံးတွေကတော့ Kiasu ဆို နာမည်ကြီးတော့ အမြင်မှာကို လူ့စရိုက် သဘာဝချင်း ကွာခြားနေပါတယ်။ မျက်နှာ အမူအရာချင်း ကွာခြားပါတယ်။ လေယာဉ်အဆင်းမှာ အသိသာဆုံးပါပဲ။ အရင် စလုံးတွေနဲ့ ခရီးသွားစဉ်က အဆင်းဆို လေယာဉ် ဘီးမချသေးဘူး၊ စလုံးလူမျိုးတွေ ထွက်ဖို့ တာတစူစူ ဖြစ်နေကြပြီ။ ခု အဖြူတွေကတော့ အေးဆေးပဲခင်ဗျ။ လေယာဉ်လုံးဝ ရပ်ပြီဆိုမှ ဖြေးဖြေး ...ဖြေးဖြေးချင်းထွက် ... နားနားပြီး ထွက်ပါတယ်။ စလုံးတွေလို လောနေတာတို့၊ ပြာလောင်ခပ်နေတာတို့၊ တိုးတာ တွန်းတာတွေ မရှိဘူးခင်ဗျ။
အင်မီဂရေးရှင်းဖြတ်ပြီး၊ ကပ်စတန်ဖြတ်တော့ မဆွိတီတို့က လဖက်ထုတ်တွေ သယ်လာတော့ white card ဖြည့်ကတည်းက အစားအသောက်တွေ ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြေငြာထားပြီးသားပါ။ လူတန်းကလဲရှည်တော့ custom officer ကလဲ သိပ် ရစ်မနေပါဘူး။ လဖက်ထုပ်ကြီး စက္ကူနဲ့ ပတ်ထားတာ ကိုင်ကြည့်ပြီး ဒါ ဘာကြီးတုံးတဲ့ မေးတယ်။ အဲဒါ Pickled tea leaves ဆိုတော့ ပြီးရောဗျာ။ ဘာမှ ထပ်ရစ်မနေဘူး။ အော်ဇီက အဓိက အသားနဲ့ သစ်ပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ မျိုးစေ့လို ပြန်ပွားလို့ရမဲ့ ဟာမျိုး သယ်လို့မရဘူး။ လုံးဝတားမြစ်ထားတာ။ သူတို့ နိူင်ငံက မျိုးကောင်းမျိုးသန့် သစ်ပင်တွေကို တခြားနေရာက မျိုးတွေ ရောယှက်၊ မျိုးကူးမှာ ကြောက်တယ်ဆိုပါတယ်။ အဲလိုဟာမျိုး တွေ့ရင်တော့ အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်ပြီသာ မှတ်ပေရော့။
ကပ်စတန်ကထွက်၊ အပြင်ရောက်တော့ ရာသီဥတုက ၁၇ ဒီဂရီလောက်ပဲရှိတော့ သားအမိ၂ယောက် အနွေးထည်တွေ တစ်ထပ်ကြီးနဲ့ ကားဆီပြေးကြတာ၊ ကားထဲရောက်မှ နွေးတော့တယ်။ မဆွိတီတို့ ငှါးထားတဲ့ အိမ်နဲ့ ဆစ်ဒ်နီလေဆိပ်က အဖြောင့်တိုင်းဆို ၂၂ကီလို လောက်ဝေးတယ်။ ကားနဲ့မောင်းတော့ ၃၀ကီလိုလောက် မောင်းရတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သားအမိ၂ယောက် အိမ်ခန်းတွေ လှည့်ပတ်ကြည့်ကြ၊ အထုပ်တွေဖြည်ကြ၊ သိမ်းကြနဲ့ပေါ့။ အိမ်က ပစ္စည်းတွေ၊ အ၀တ်တွေထည့်ထဲ့ Build in ဘီရိုတွေ အများကြီးပါလို့ မျက်စေ့ရှုပ်တာ မကြိုက်တဲ့ မဆွိတီက အပြတ်သဘောကျနေတာ။
ညကျတော့ ဂျူဂျူးက ချမ်းတယ်ဆိုလို့ သူ့အဖေက အလိုလိုက်ပြီး heater ကြီး ဖွင့်ပေးထားတာပါဗျား။ သူတို့ဆီမှာ heater တွေက gas နဲ့ ရှိတယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ရှိတယ်။ အိမ်မှာတော့ gas heater တစ်ခု အရင်လူက ထားခဲ့တော့ ၀ယ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ Gas heater ဆိုတော့ မက်ကယ်နီကယ် အင်ဂျင်နီယာ တီတီဆွိတို့ သဘောပေါက်လိုက်တာက အထဲမှာ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ အင်ဂျင်ကိုလည်၊ အင်ဂျင်ကနေ မော်တာလည်၊ လျှပ်စစ်ထုတ်၊ အဲဒီကနေ အဲယားကွန်းလို compressor တွေ၊ ဘာတွေနဲ့ လေကို နွေးအောင်လုပ်ပြီး ပြန်ထုတ် အဲလိုထင်နေတာ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ gas ကို ကိုယ့်ရှေ့တင် တိုက်ရိုက်ကြီး မီးထွန်းပြီး လျှပ်စစ်မီးဖိုကလို တန်စတင်ခွေလိုဟာမျိုးလေးတွေ ပူအောင်လုပ်ပြီး မီးကနေ တိုက်ရိုက် အပူရအောင်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါသဗျား။ ဒါလဲ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်။
အော်ဇီမှာ အိမ်တွေကလဲ စလုံးလို ကျောက်ပြားခင်း မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ရာသီဥတုက တစ်ချိန်လုံး အေးနေတော့ အိမ်ထဲမှာ အများအားဖြင့် ကော်ဇောလို ကြမ်းခင်းမျိုးတွေ ခင်းကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ သစ်သား လျှာထိုးတွေ ခင်းကြတယ်တဲ့။ မဆွိတီတို့ အိမ်မှာတော့ ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုခန်းကလွဲလို့ ကော်ဇောကို ခပ်ညစ်ညစ်အရောင် ခင်းထားပါတယ်။ အပေအတေခံအောင်ပေါ့။ အိမ်အရောင်ကတော့ ညစ်တစ်တစ်နဲ့ မလှတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ အဲဒီ့အရောင်ကို ဂျီးရောင်တဲ့ ခေါ်သဗျ။ ကော်ဇောခင်းတာ နောက်တစ်ခုမကောင်းတာက အနံ့တစ်မျိုးထွက်တာပါပဲ။ အိမ်တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဖုံနံ့လိုလို၊ ခပ်အောက်အောက် အနံ့မျိုးထွက်လာတာ အင်မတန် ဆိုးပါတယ်။
မဆွိတီတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်က ရန်ကုန် ၀င်ဒါမီယာအောက်ချိုင့်လို သူငှေးတွေ နေတဲ့ ရပ်ကွက်လို့ သိရပါတယ်။ ရောက်တာ ၃ရက်ရှိပြီ ခုချိန်ထိ လမ်းတွေမှာလဲ လူသူသွားလာနေတာ မတွေ့ရပါဘူး။ အိမ်တွေကလဲ တံခါးတွေ ပိတ်ထားတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာ အေးစက် တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ သူငှေးတွေသာ ဆိုတယ်ဂျာ၊ ညဖက်ဆိုလည်း အိမ်နားမှာ လမ်းမီးမရှိပဲ မှောင်မဲနေပါတယ်။ အဲနေ့ညက အမှိုက်သိမ်းကားလာမှာမှို့ ည၈နာရီလောက် လမ်းမမှာ အမှိုက်ပုံးတွေ သွားချတာ။ အိမ်မှာ ဓာတ်မီးကလဲ မ၀ယ်ထားတော့ hand phone က မီးရောင်လေးသုံးပြီး သွားပို့တာမှာ၊ လျှပ်စစ်မီး ထိန်ထိန်ငြီးတဲ့ ခြင်္သေ့ကျွန်းက လာတဲ့ မဆွိတီဟာ မီးမရှိတဲ့ အမေတို့ရွာကို အလည်ရောက်သွားသလား ထင်မှတ်မှားရပါတယ်။ အနားမှာ ကောက်ရိုးပုံတွေ၊ ပြောင်းရိုးပုံတွေ၊ ပဲစဉ်းငုံကိုင်းတွေ၊ ဖုံမထူတာ၊ နွားတွေ မရှိတာကလွဲလို့ တိတ်ဆိတ်မှုနဲ့ မှောင်မဲနေတာကတော့ တူတူပါပဲဂျာ။
ရောက် စ နေ့က ဦးခြိမ့်က ခွင့်ယူထားပြီး မဆွိတီတို့ သားအမ်ိကို ပတ်ဝန်းကျင် မြို့လေးတွေဖက်၊ ရှော့ပင်းစင်တာတွေဖက် လျှောက်ပြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထူးဆန်းတာက ဘယ့်နှယ် ဆစ်ဒနီသာဆိုတယ်။ များလိုက်တဲ့ တရုတ်တွေဗျာ။ အဲဒီ Eastwood ဆိုတဲ့ အရပ်မှာ လူ ၁၀၀ လမ်းပေါ်ရှိရင် ၉၅ ယောက်က တရုတ်ပဲ။ လမ်းပေါ်သွားလာနေကြတာလဲ တရုတ်တွေပဲမြင်ရတယ်။ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေကလဲ ပေါမှပေါ။ ဘဏ်သွားတော့လဲ ဘဏ်မန်နေဂျာက တရုတ်ပဲ၊ ရှောပင်းသွားတော့လဲ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက တရုတ်တွေပဲ။ အော် ကိုယ်ရောက်နေတာ အော်ဇီလား၊ တရုတ်ပြည်လား ပြန် remind လုပ်နေရပါသဗျား။
နောက်နေ့ကျ ဦးခြိမ့်အလုပ်သွားတုံး သားအမိ၂ယောက် အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာ အိမ်ခြံဝန်းထဲမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြတယ်ခင်ဗျ။ ဂျူဂျူလေးတို့ တက်မဲ့ကျောင်းတွေက ဟောလီးဒေး ပိတ်ထားတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ ဂျူဂျူးလဲ အားနေပါတယ်။ သူ့ကိုလဲ ရောက်စ ပျော်အောင်ထားနေရပါတယ်။ အိမ်ဘေးက အုပ်ခင်းထားတာ ကြားထဲမှာ ပေါက်နေတဲ့ မြက်တွေ၊ အပင်အသေးလေးတွေ နှုတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ မဆွိတီလဲ သူနဲ့ အတူ ၀င်နှုတ်ရင်း ငယ်ငယ်က ၀က်တွေ မွေးတော့ မောင်နှမတွေ ၀က်စားဖို့ မြက်နှုတ်တာတွေ ၊ နှင်းဆီပန်းတွေ စိုက်တော့လဲ နှင်းဆီဘောင်တွေကြား မောင်လေးနဲ့ ပုံတွေပြောရင်း မြက်အတူနှုတ်ကြတာတွေ သွားသတိရမိပါတယ်။ ခုတော့ သမီးလေးဂျူဂျူနဲ့ အတူ မြက်နှုတ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ အတွေ့အကြုံ အသစ်ဆိုတော့ တက်ကျွတဲ့ ကြက်ဖ ဂျူဂျူတို့ အင်တိုက်၊ အားတိုက် မြက်တွေ နှုတ်ပါတယ်။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ လှဲပါတယ်။ အမှိုက်တွေ ကျုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်နေ့ ဒီထက်ပျင်းလာတော့ တစ်ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ ဂျူဂျူတို့ ကျောင်းဆီ သားအမိ၂ယောက် လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ တစ်နေ့ကလဲ ဂျူဂျူက ပီဇာစားချင်တယ်ဆိုလို့ ပီဇာဆိုင် လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ပီဇာတော့ ပေါသဗျ။ ၁၀လက်မပတ်လည်တစ်ခုကို အော်ဇီ ၅ကျပ်ပဲရှိတယ်။ ဂျူဂျူတို့ အကြိုက်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ပီဇာဆိုင်တွေကလဲ ထိုင်စားစရာ နေရာမရှိဘူး ခင်ဗျ။ Delivery လား၊ pick up လား။ ပီဇာလုပ်တာလဲ တရုတ်ကောင်လေး တစ်ယောက်တည်း ထိုင်လုပ်နေတာ။ ဆိုင်ရှေ့မှာ မတ်တတ်စောင့်။ ၅မိနစ်လောက်နေ ရရောပဲ။ ဒီမှာ ပီဇာရောင်းတာ မဆွိတီတို့ဆီမှာ မုန့်ပြားသလက်ရောင်းသလောက်တောင် မထူးဆန်းတဲ့ သဘောဗျ။
ပီဇာဆိုင် အပြန်လမ်းမှာ ဦးခြိမ့်က ဒီမရောက်ခင် ခဏခဏ ပြောနေတာ။ ကိုယ်လဲ Google Earth ကနေ သွားသွားကြည့်နေတဲ့ ရထားဘူတာရုံပေါ့ဗျာ။ စလုံးလိုဆို MRT station ပေါ့။ သူက မြို့ထဲပတ်ပြီး သွားနေတာပေါ့။ တစ်ချို့တော်တော်များများလဲ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ရထားစီးကြတယ်ပြောတယ်။ လမ်းက ဂုံးကျော် တံတားလေးအောက်ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ရထားဘူတာရုံဆို ခန်းခန်းနားနာ စလုံးက MRT station တွေ ပြေးမြင်တာ တက်တက်စင်အောင်လွဲပါရောလား။ ရထားလမ်းကလဲ မြေကြီးပေါ်မှာ ရန်ကုန်က မြို့ပတ်ရထားတွေ အတိုင်း ဒီတိုင်း ငေါင်းစင်းစင်းကြီးခင်ည။ ဘာမှလဲ အကာအရံမရှိဘူးထင်တာပဲ။ဘူတာရုံကလဲ တိုးကြောင်လေး ဘူတာရုံ သာသာပဲရှိပါသဗျား။ မဆွိတီကတော့ တိုးကြောင်ကလေး ဘူတာလို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
ရာသီဥတုက အေးတော့ လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းဘေးက အိမ်လေးတွေငေး၊ ခြံစည်းရိုးမှာ အလှစိုက်ထားတဲ့ ရောင်စုံပန်းလေးတွေ ငေးပြီးသွားရတာ ပျော်စရာတော့ကောင်းသား။ ပန်းတွေ အပင်တွေကလည်း ကိုယ်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ အပင်တွေချည်း။ အထူးအဆန်းတွေချည်းပါပဲ။ တစ်လမ်းလုံးလဲ တောသူမြို့ရောက် မဆွိတီတို့ သားအမိပဲရှိတယ်။ အော်ဇီက လူတိုင်းနီးပါး ကားစီးနိူင်တယ်။ လူတိုင်းနီးပါး ကားတွေနဲ့ပဲ သွားနေကြတော့ လူတွေဟာ အိမ်ထဲမှာ နေရင်နေ၊ မဟုတ်ရင် ကားတွေပေါ်မှာပဲရှိနေတော့ လမ်းမှာ လူတွေ သွားလာနေတာ မမြင်ရဘူးပေါ့ဂျာ။ အဟွန်း ... ဒီကလဲ စလုံးလို ပျားပန်းခပ်မျှ လူစည်ကားတဲ့ အရပ်က လာတဲ့သူဆိုတော့ အော်ဇီနဲ့တော့ ခက်ကပြီပဲ။
မဆွိတီတို့ အိမ်ကပစ္စည်းတွေကို စလုံးက Fright forwards ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ သင်္ဘောကနေ ပို့လိုက်တာ ၃၃ ပုံး (၅ ကုဗမီတာတောင်) ရှိပါတယ်ခင်ညာ။ အဲဒါတွေကလည်း အချိန်မှန် ရောက်မလာပဲ delay ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်လကြာရင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ ပိုပိုလိုလို တစ်လခွဲ ကြိုပို့လိုက်တာတောင် ၃ရက်နောက်ကျနေလို့ ဒီနေ့မှ ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ အထုတ်တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်က ဂျူဂျူ အစာကြေအောင်စားတဲ့ အောင်တံခွန် ဆင်တုံးမနွယ်ဆေးဘူး ၁၀ဘူးက ကွာရင်တိုင်း မိနေလို့ အော်ဇီ ၂၈၀ ဆောင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ အော် ... ၂၈၀ ပေးရမှာဆိုတော့ ဆေးဗူးတွေ ပြန်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ ဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ ။ ဆေးဘူးတွေ မီးရှို့ဖျက်စီးခဆိုပဲ။ ဆေးဘူးမှာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးမထားတော့ ဘာမှန်းမသိလို့ ဖျက်ဆီးခံရတာပါတဲ့ဗျာ။ အဖြစ်ကတော့ ကိုယ့်ဆေးဗူးလဲ ဖျက်စီင်္းခံရသေး။ ဒါဏ်ငွေကလဲဆောင်ရဆိုတော့ အားလားမား အော်ဇီလို့သာ အော်လိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ဒီမှာ ဦးခြိမ့်ကလဲ တစ်မှောင့်ခင်ဗျာ။ အိမ်က ပစ္စည်းတွေ အကုန်နီးပါး ပို့လိုက်ပြီ။ ဘာမှ မ၀ယ်ပါနဲ့၊ ပိုက်ပိုက်တွေ ၂ခါကုန်မယ်ဆိုတာကို မနေပါဘူး။ ဟိုဟာလေးကတော့ မရှိမဖြစ်လိုတယ်၊ ဒါလေးကလဲ လိုအပ်တယ်နဲ့ ၀ယ်ထားလိုက်တာ ကိုယ်လဲဒီရောက်ရော၊ ဟိုကပစ္စည်းတွေ မရောက်ပဲနဲ့ကို နေလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ ဦးခြိ်မ့်က အိမ်တစ်ဆောင် မီးတစ်ပြောင်နဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဖြစ်နေပါပြီဗျာ။ ကိုယ်အရောက်မြန်ပေလို့ပဲ။ ဦးခြိမ့်မှာ အိမ်ရှင်မပဲ လိုတော့တာဗျားး))
Posted by T T Sweet at 8:21 AM 40 comments: Links to this post
ယနေ့သည်ကား မဆွိတီတို့ သားအမိ ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ ထွက်ခွါရတော့မည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ဒီအိမ်ကို စွန့်ရတော့မည်၊ ဒီမြေကိုစွန့်ရတော့မည်၊ ဒီသူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများ ခွဲခွါရတော့မည်ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အတော်မကောင်းလှ။ ၁၃နှစ်အတွင်း အဖြစ်အပျက်များစွာ၊ အမှတ်တရများစွာ ရှိခဲ့ဖူးသည် မဟုတ်လား။ မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခုသော မြန်မာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ဒီအိမ်ပြောင်းခဲ့သည်။ ခုလဲ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မတိုင်မီ ပြောင်းရပြန်သည်။ ၈နှစ်တိတိ ဤအိမ်တွင် ကြာခဲ့သည်။
ဂျူဂျူလေးအတွက်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ကိုယ်ကတော့ လူကြီးမှို့ လောကဓမ္မတာ ချစ်ခင်ပေါင်းသင်း ခွဲခွါခြင်းများကို နားလည်ထားခဲ့ပြီ။ ကြုံလဲကြုံဖူးခဲ့သည်မှို့ ခံနိူင်ရည်ရှိမည်ဟု ထင်သည်။ ဂျူဂျူလေးကတော့ ငယ်သေးသည်။ မွေးစကထဲက ထိန်းကျောင်းပြီး အတူတကွ နေခဲ့သော၊ ညစဉ် အတူအိပ်ခဲ့ရသော ကြီးတော်ဖြစ်သူနှင့် ခွဲရတော့မည်။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများနှင့် ခွဲရတော့မည်။
တစ်နေ့ကတော့ ဂျူဂျူ့သူငယ်ချင်းလေးများအတွက် လက်ဆောင်များ ထုတ်ပိုးတော့ သူကတက်ကြွစွာဖြင့် ကူညီနေသည်။ ပြီးတော့ တစ်အိမ်တက်ဆင်း လက်ဆောင်လေးတွေပေး၊ ကပ်ပြားလေးတွေမှာ အမှတ်တရ စာလေးများရေးနေရတာကိုပင် သူကပျော်နေသေးသည်။ ခလေးဆိုတော့ ခွဲခွါရမည်ဆိုတာထက် သူတစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတာလေးတွေ လုပ်နေရတာကို ပျော်နေခြင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ ဂျူဂျူသည် သူ့အဖေနှင့်တူလှသည်။ အလွန်အပေါင်းအသင်း ခင်သူ၊ အပေါင်းအသင်းမက်သူဖြစ်သည်။ အမေထက်ပင် ဆိုရှယ်ကျသည် ပြောရမည်။ ဘယ်နေရာသွားသွား ခလေးချင်း အပေါင်းအသင်းဖြစ်တာ သိပ်မြန်သည်။ မှတ်မိသည်က တစ်ခါသား Perth ဖက်ကို သွားလည်စဉ် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်၏ သမီးလေးက ၄တန်းလောက်၊ နာမည်လေးက အေးမြဖြူတဲ့။ ဂျူဂျူက K2၊ တွေ့ပြီး ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်လောက်သာကြာသည်။ မမအေးမြဖြူ မမအေးမြဖြူဆိုကာ နှုတ်က မချ။ အတူကစားကြသည်။ လမ်းတွင်လည်း နှစ်ရှည်လများခင်ခဲ့သည့် သူငယ်ချင်းတွေအလား လက်အတူတွဲကာ သီချင်းဆိုကြ ဆော့ကြ ချက်ချင်းဖြစ်သွားတော့သည်။ အဲဒီကတည်းက မဆွိတီမှာ ဂျူဂျူလေး၏ ဆိုရှယ်စွမ်းရည်ကို သတိထားမိခဲ့သည်။
အိမ်ကိုဧည့်သည်လာမည်ဆိုလျှင်လည်း သူအလွန်ပျော်သည်။ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် ဘယ်သူပဲလာလာ သူပျော်သည်။ ဒီနေ့တော့ အိမ်ကို ဘယ်သူလာမယ်ဟေ့ဆို ပြောမိလျှင် အဲဒီတစ်နေ့လုံး ဂျူဂျူတို့ ဧည့်သည်စောင့်တော့သည်။ မလာမချင်း တဂျီဂျီနှင့် မေမေ ဧည့်သည်က ဘယ်တော့ လာမှာလဲ၊ မလာသေးဘူးလား၊ ၃နာရီတောင် ထိုးပြီ၊ သူတို့က ဘာလို့မလာသေးတာတုံး။ အဲလိုတွေ တောက်လျှောက်မေးတော့သည်။ နောက်ပိုင်းတော့ ဧည့်သည်လာမည်ဆို ဂျူဂျူကို မပြောရဲတော့၊ လာကာမှလာရော့ပဲ။
မဆွိတီတို့ အိမ်နားတွင်လည်း ဦးခြိမ့်သူငယ်ချင်းများစုနေကြရာ သူငယ်ချင်းများမှလဲ သမီးတွေချည်း မွေးထားသည်ဖြစ်ရကား သူတို့အချင်းချင်းလည်း အလွန်ချစ်ကြသည်။ အားလုံးကလဲ တစ်နှစ်ကြီး တစ်နှစ်ငယ် -၂နှစ်ကြီး ၂နှစ်ငယ်တွေ၊ ဗုံတွေစီထားသလို အသက် ၁၁နှစ်မှသည် ၅နှစ်အထိ ရှိကြသည်။ ဂျုဂျူသည်ကား ထိုသူငယ်ချင်းများနှင့် အကြီး အငယ်မရွေး အားလုံးချစ်ခင်သည်ချည်းဖြစ်သည်။ အကြီးတွေဆိုလည်း အကြီးမှို့ သူတည့်အောင်ပေါင်းသည်။ ခင်သည်။ ခလေးမလေးတွေကလဲ အစ်မကြီးတွေလို ဂျူဂျူ့ကို ချစ်ကြသည်။ အငယ်တွေကလည်း မမဂျူဂျူ ... မမဂျူဂျူ ဆိုကာ ချစ်ကြပါသည်။ အိမ်အောက်ထပ်က မောင်နှမ၂ယောက်နှင့်လဲ အားတိုင်း သူ့အိမ်သွားလိုက်၊ ကိုယ့်အိမ်သွားလိုက် ကစားနေကျဆိုတော့ အကြီးမလေးက စိတ်မကောင်း။ ဂျူဂျူသွားရင်တော့ ပျင်းနေတော့မှာပဲ ဆို ခဏခဏပြောနေတော့သည်။ တစ်ယောက်ကလဲ ပထမတော့ သွားတော့မည်ဆို ခဏအလည်သွားမည်ထင်နေသည်။ နောက်အိမ်ရောက်မှ အပြီသွားမည်ဆိုတာသိရတော့ ငိုတော့သည်တဲ့၊ သူ့အမေက ပြောပြသည်။
မနေ့က ဂျူ့ဂျူ့သူငယ်ချင်းလေးတွေကလဲ လက်ဆောင်လေးတွေ၊ ကပ်ပြားလေးတွေမှာ စာလေးတွေရေးပြီး လာပို့ကြသည်။ တစ်ချို့ကလည်း ဂျူဂျူ့ ဂျီမေးမှာ စာပို့ကြသည်။ ဂျူဂျူတော့မသိ။ ခလေးလေးတွေစာကို ဖတ်ကာ မဆွိတီမှာ ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးသည်။ စိတ်မကောင်း မဖြစ် ရှိရိုးလား။ အန်တီသက်ဝေတို့၊ အန်တီ တန်ခူးတို့၊ အန်တီ စုချစ်တို့လို နာမည်ကျော် ဘလော့ဂ်ဂါတွေပင် မဆွိတီထံ ဤသို့စာမရေးဖူးကြတာကိုး။ (JK).
ခလေးများ၏ အလွမ်းစာများသည် ချစ်ဖွယ်ကောင်းလှပါတကား။
Posted by T T Sweet at 10:34 AM 24 comments: Links to this post
Posted by T T Sweet at 12:40 PM 28 comments: Links to this post
Labels: (၁- ၃) မန္တလေးမုန့်တီ, (၁) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***
(ကိုယ်ကလဲ ပန်ကို လာခဲ့လို့ ပြောပြီးနေပြီ။ အိမ်ကိုလဲ view တာ ရပ်လိုက်ပြီလို့ ကတိကပေးပြီးသွားပြီ။ ညနေကျ ပန်နဲ့ အိမ်ကြည့်တဲ့သူတွေ ဘာဖြစ်ကြဦးမလဲ ငွေရောင် ပိတ်ကား ... အဲလေ ငွေရောင်ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဆက်ကြည့်ကြပါကုန်။ )
တကယ်တန်းကျ အန်တီဆွိလဲ အဲလို ထိပ်တိုက်ကြီးတွေ့ပေးဖို့ ဘယ်သတ္တိရှိမလဲဗျာ။ ပွဲစားအစ်မကို သေချာခေါ်ပြောပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းကြည့်တော့ သူတို့က အားလုံးခေါ်ပြီးပြီမှို့ ဖျက်မရတော့ဘူးတဲ့။ မဆွိပဲ အလုပ်များတာ အကြောင်းပြပြီး နောက်နေ့ချိန်းလိုက်ပါတဲ့ဆိုတာနဲ့ ပန်ကို နောက်ပိုင်း အလုပ်အားတဲ့နေ့မှပဲ လာခဲ့ပါလို့ ချိန်းလိုက်ရတယ်။
ညကျတော့ အိမ်ငှါးတွေ လာကြည့်တာ အများကြီးဆိုတော့ မဆွိတီတို့ အိမ်ရှေ့တိုက်အောက်တွေမှာ ပွဲစားတွေ၊ အိမ်ငှါးတွေ ခြေချင်းလိမ်လို့ပေါ့ဗျာ။ ပွဲစားအစ်မက တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ ခေါ်ပေမဲ့ တချို့တွေကလဲ မစောင့်နိူင်တော့ အိမ်ထဲမှာလဲ အိမ်ကြည့်သူတွေ တရုန်းရုန်းပေါ့ဗျာ။ မလေး-တရုပ်မလေးတွေတစ်ဖွဲ့နဲ့ ကျန်တာတွေက ကုလားလူမျိုးတွေချည်းပဲ။ အဲဒီထဲမှာမှ ပထမဆုံးလာကြည့်တဲ့ ကုလားလင်မယားက ညားကာစတဲ့ ခင်ဗျ။ သူတို့ အဖေ၊ အမေနဲ့ ပွဲစားပါ ပါလာပြီး အိမ်လာကြည့်ကြတာ။ အိမ်ကို အပြန်ပြန်၊ အလှန်လှန်ကြည့်ကြပြီး သူတို့အိမ်ကို အင်မတန်ကြိုက်တဲ့အကြောင်း လင်မယား၂ယောက်ထဲနေမှာမှို့ သူတို့ကိုပဲ ငှါးပါဆို မဆွိတီကို အဖေလုပ်သူက တိုက်ရိုက်လာပြောတယ်။ မဆွိတီကလဲ အေးဂျင့်ကို ပြောပါပေါ့။ ဆိုလိုတာက သူတို့ ဘယ်လောက် အော်ဖာလုပ်မလဲ၊ ဘယ်နှစ်ယောက်နေမလဲ ဆိုတာ၊ နောက်ဆုံး အဖွဲ့အကုန်လုံးက ဖောင်တစ်ခုမှာဖြည့်ပြီး အေးဂျင့်ကို ပေးခဲ့ရမှာမှို့ပါ။
နောက်ဆုံး အဖွဲ့တွေအကုန်ကြည့်ပြီး ဖောင်တွေဖြည့်ထားခဲ့၊ တစ်နာရီအတွင်း အေးဂျင့်ကခေါ်ပြီး black and white အကြောင်းပြန်ရမယ့် အချိန်အထိ အဲဒီကုလားလူမျိုး လင်မယားနဲ့ အဖွဲ့က မပြန်ပဲ အိမ်ရှေ့ဝရမ်တာမှာ စောင့်နေတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ ဘယ်လောက် offer ပေးလဲ ပွဲစားအစ်မကို မေးကြည့်တော့ ၁၈၀၀ တဲ့ခင်ဗျာ။ ၁၈၀၀ နဲ့ ငှါးဖို့အရေး ပွဲစားအစ်မနဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ ဒူးတိုက်ဆွေးနွေးနေကြတာ။ နောက်ဆုံးတော့ အစ်မကမနိူင်တော့ လို့ ကဲ အိမ်ရှင်ကိုပဲ တိုက်ရိုက်မေးပါတော့ဆို မဆွိတီဘက် မြားဦးလှည့်လာတယ်။ ဒီတော့လဲ မတတ်နိူင်တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ အိမ်ကို ကြော်ငြာတာ ၂၅၀၀ နဲ့၊ ၁၈၀၀ကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိူင်ပါလို့ ငြင်းလိုက်ရတော့တယ်။
ဒါကိုပဲ သူတို့ပွဲစားက ၂ယောက်ထဲနေမှာမှို့ ၁၈၀၀ ပေးတာ၊ ၆ယောက်လောက်နေတဲ့သူတွေ ၂၃၀၀-၂၄၀၀ ပေးတာနဲ့ မယှဉ်ပါနဲ့ဆို လာပြောနေလို့ အတော်ကို လက်ပေါက်ကပ်အောင် ဖြေရှင်းနေရတယ်။ တခြားအဖွဲ့တွေကတော့ ၂၂၀၀-၂၃၀၀ လောက် offer ပါတယ်။ လူကတော့ ထုံးစံ ၆ယောက်-၇ယောက်တွေ။ ၂၄၀၀ ပေးတဲ့ တစ်ဖွဲ့ဆို ၈ယောက်တောင်နေမယ်ဆိုတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကုလားလင်မယားနဲ့ အဖွဲ့လဲ လက်လျှော့ပြီး ပြန်သွားကြတော့တယ်။ တကယ်ကိုဗျာ အိမ်ငှါးရတာ လူလဲ ခေါင်းတွေပါကိုက်။ ပြောရဆိုရတာတွေကလဲ လူပါ ငွေစော်တွေနံနေတာ။
နောက်နေ့ကျ ပွဲစားအစ်မက မဆွိတီကိ်ု ဖုံးဆက်ပြောတယ်။ အဲဒီကုလားပွဲစားက ပြောသတဲ့။ အိမ်ရှင်က သူ့ client ကို သဘောကျပါရက်နဲ့ ပွဲစားက သေချာညှိမပေးလို့ မငှါးတာပါဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ပြသနာရှာသတဲ့။ အစ်မက မျိုးစုံရှင်းပြပေမဲ့ မကျေနပ်နိူင်ပဲ ကုမ္ပဏီကိုပါ တိုင်မယ်တွေ၊ ဘာတွေအထိ ချိန်းခြောက်ပြီး ပြောသတဲ့။ ပွဲစားအစ်မလဲ စိတ်တိုလွန်းလို့ စကားပြောတာတောင် အသံတွေ တုန်နေတယ်။ မဆွိတီလဲ အစ်မကို အရမ်းအားနာပြီး ဖြောင့်ဖြရပါတယ်။ ပွဲစားအလုပ်မှာလဲ အဲလိုပြသနာတွေရှိပါလားလို့ သိလိုက်ရတယ်။ အစ်မက တဆက်တည်း ဒီနေ့လဲ အိမ်လာကြည့်သူ ၆ဖွဲ့ လာကြည့်ဦးမယ်။ အားလုံး ချိန်းပြီးသွားပြီတဲ့ဆို ဖုံးချသွားပါရော။
နေ့ခင်းကျ ပန်က တမှောင့်။ သူဒီနေ့လာခဲ့မယ်ဆို လုပ်ပြန်ပါတယ်။ မဆွိတီလဲ နေ့စဉ်ကြီး အလုပ်များတယ် မကြည့်ပါနဲ့ဆို မပြောချင်နေတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပန်ကို ပြောလိုက်တော့တယ်။ ငါနင့်ကို အိမ်ကို မပြတော့ဘူး ကတိပေးမိပေမဲ့ ပွဲစားတွေကတော့ ပြောလို့မရဘူး။ သူတို့တာဝန်ကျေအောင် အိမ်ကို ဆက်ပြနေဆဲပဲ။ အိမ်လာရင် နင် တခြား အိမ်လာကြည့်သူတွေနဲ့ တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။ နင် deposit ပေးပြီး လက်မှတ်ထိုးမှ သူတို့က အိမ်ပြတာ ရပ်မယ်ပြောတယ် ဆိုတော့ ပန်ကလဲ I am very worry ... I am very worry ... ဆို စိတ်ပူပြီး အော်ဇီက သူ့အမျိုးသားဆီဆက်၊ သူ့အမျိုးသားက မဆွိတီကိုဆက်နဲ့ မဆွိတီလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီည တစ်ခါပြပြီးရင် ကိုယ့်ဘက်က risk ယူပြီး ပွဲစားအစ်မကို အိမ်ပြတာ ရပ်ဖို့ ပြောလိုက်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်မှ သူတို့ဘက်က ကတိသစ္စာဖောက်လဲ ကိုယ်ခံ။ ကိုယ်ဆက်ရှာပေါ့။ ဒီဇာတ်ရှုပ်ကြီးတော့ ဆက်မကချင်တော့ဘူး။
ညနေကျ ပန်က စောစောလာကြည့်ပီး ပြန်သွားတယ်။ ည၇နာရီလောက်ကျ ထုံးစံအတိုင်း တရုန်းရုန်းနဲ့ အိမ်ကြည့်သူတွေ ပွဲစားတွေ တဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ။ အော်ဖာကတော့ ထုံးစံ ၂၃၀၀-၂၄၀၀ လောက်ပေးကြပါတယ်။ လူကလဲ ၆ယောက်-၇ယောက်တွေ ချည့်ပဲ။ ကုလားလူမျိုး တစ်ဖွဲ့က ၆ယောက်ကို ၂၄၀၀ ပေးပေမဲ့ မဆွိတီလဲ လူများလို့ ငြင်းလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီက ပွဲစားနဲ့လဲ သူတို့တောင်းတဲ့အတိုင်း အော်ဖာပေးပါရက်နဲ့ ဘာလို့ မငှါးရသလဲဆို တော်တော်ကို ဖြေရှင်းရသေးတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီပွဲစားတရုတ်လေးကလဲ ပြန်သာသွားတယ်။ သူတို့မရလိုက်ရတာကို တော်တော်ကို မကျေနပ်ကြဘူး။ မဆွိတီလဲ ဖြေရှင်းရတာ အတော်မျက်နှာပူနေပြီ။ ပြောရတာတွေလဲ အားနာစရာကောင်းနေပါပြီ။
အားလုံးကြည့်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ မဆွိတီ ပွဲစားအစ်မတွေကို အိမ်ကိုဘာလို့ open house လုပ်ပြီး မပြတာလဲ။ ဘာလို့ လူအများကြီး မခေါ်ပဲ လူစစ်ချပြီးမှခေါ်ပြသလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ ပန်တို့မိသားစုအတွက် ပွဲစားခမယူပဲ စေတနာနဲ့လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ အိမ်ပြတာကိုလည်း ရပ်လိုက်ပြီး ပန်တို့မိသားစုကိုပဲ စောင့်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တိမ်ပြာပြာဆန်းဒေးနေ့တစ်နေ့မှာ ပန်တို့လင်မယား အိမ်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်၊ ညကျတော့ ပွဲစားတွေပါခေါ်ပြီး အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှါး စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးကြပါတယ်။ နောက်နေ့ ပွဲစားက အိမ်လာပြီး HDB ကို on line ကနေ လျှောက်လိုက်တာ ချက်ချင်းပဲ approve ဖြစ်လို့ မဆွိတီလည်း အိမ်ငှါးကိစ္စအတွက် စိတ်အေးသွားရပါတော့တယ်ခင်ဗျား။
ဤတွင်ပဲ အန်တီဆွိနဲ့ အိမ်ရှင် အိမ်ငှါး ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းပြီးပါပြီ။ ကားလိပ်ချ။း)
Posted by T T Sweet at 10:05 AM 11 comments: Links to this post
Today I wake up so early about5AM. Couldn't sleep well. I havealot of things to do today. To go to Jurong Point, IMM, 52 street wet market, Vivo city, Golden mile and so on. I plan to go to 52 st market first. Wet markets are opened earlier than super market. When I have finished shower, Ju Ju is still in the bed. I decided to go alone. I waited for 10mins for the bus at bus-stop.
When the bus came, it was crowded, but fortunately I gotaseat to sit. One of the lady, with lining with gray hair was standing in front of me. I felt, I wanted to give up my seat for her. At the same time, I didn't want her to feel that she is too old to give up the seat for her. Finally, I decided to continue to sit. When I looked around, most of the ladies are old, they all are so call senior citizen. One of the lady wear colourful T-shirt, one was SMS-ing, one Malay lady with sarong was sleeping. By seeing them, I feelabit bore and sad. I miss my life in office,acapable woman with fresh mind. I feel myself, they are old, I am still young and I am still active, I have still youthful face. I even try to fast my action in front of them to show I am still young, different with them. A bit funny, ha ha! like Mr. Bean. Really, I am very bad.
After I went around and around 52 street market, I couldn't findathing what I wanted to buy and decided to go back home. Weather is very hot like Yangon near Thin Gyan time and I was wet with sweat. Singapore humidity is very high, easy to sweat when we move. My hair was stick with sweat. Before going to the bus stop, I passed by one of clothes retail shop. I sawabig mirror in front of the shop. When I passed there, I accidentally saw my image in the mirror and, ... I realized that Ar La Mah! I am no different with those old ladies whom I saw in the bus. This may be my first feeling on depression of old age upon early retirement.
(I posted this by iPhone in the bus. Thanks.)
Posted by T T Sweet at 12:17 PM 16 comments: Links to this post
အန်တီဆွိတို့ ဘလော့ဂါမှို့လားမသိ။ ဘာလုပ်လုပ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့။ ခုအိမ်ငှါးဖို့ လုပ်ပြန်တော့လဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့။ ဟိုဘက်မှာနေဖို့ ဦးခြိမ့်အိမ်ငှါးတော့လဲ ဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိတယ်။ အိမ်ကကားရောင်းတော့လဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့။ မျိုးကြီးသီချင်းလို ဖြေးဖြေး ဖြေးဖြေး ...ရေး၊ နားနားပြီး ရေးပါမယ် ပေါ့း))
မဆွိတီတို့ ဟိုဖက်ကို ပြောင်းကြတော့မယ်ဆိုတော့ အိမ်ကိုမရောင်းသေးပဲ ပွဲစားလက်အပ်ပြီ ငှါးထားခဲ့မယ်ဆို လင်မယား၂ယောက် တိုင်ပင်ထားကြတာ။ ဟိုဖက်ကအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဆိုတော့ ဖောင်မဖျက်ရဲသေးဘူးကိုး။
ဒီလိုနဲ့ တကယ့်ငှါးမဲ့ အချိန်လဲရောက်ရော ဦးခြိမ့်က ဆစ်ဒနီရောက်နေပြီလေ။ ဒီတော့အိမ်ငှါးဖို့တာဝန်က မဆွိတီ ပုခုံးပေါ် လုံးလုံးရောက်လာပါရော။ အိမ်ငှါးဖို့ရာအတွက် ပထမဆုံး ပွဲစားကို အရင်ရွေးရတယ်ခင်ည။ အသိပွဲစားတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်ပြီး နောက်ဆုံး ဗမာလို စကားပြောလို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဗမာပွဲစား ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပဲ အပ်လိုက်တယ်။ အလုပ်အပ် စာချုပ်တွေ၊ ဘာတွေ လက်မှတ်ထိုးတော့ ပွဲစား အစ်မတစ်ယောက်ပါခေါ်လာပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သူတို့က ဗမာအေးဂျင့်အဖွဲ့၊ အတူတွဲလုပ်ကြတာပေါ့။ အဲဒီအေးဂျင့်အစ်မအိမ်က မဆွိတီတို့ အိမ်နဲ့ နီးတော့ အိမ်ပြတာတွေဘာတွေ သူကပဲ ဦးဆောင်လုပ်မဲ့ သဘောနဲ့တူပါရဲ့။
တကယ်တော့ မဆွိတီတို့ အိမ်ကိုအပ်လိုက်တာ တော်တော်စောပါတယ်။ ကိုယ် အလုပ်ကထွက်လို့ရတဲ့ အချိန်နဲ့ကိုက်တဲ့နေ့ကို ရွေးလိုက်တော့ အိမ်ငှါး စ တက်ရမဲ့နေ့က ဧပြီလ ၂၀ရက်နေ့ဖြစ်သွားတယ်။ အေးဂျင့်ကို အိမ်ခေါ်ပြတော့ အိမ်က စလုံး ၂၄၀၀-၂၅၀၀ လောက်ရနိူင်တယ်။ date ကလည်း အဲဒီနေ့ကို fix လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့။ လကုန်ရက်မဟုတ်လဲ ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ အဲနေ့ကိုပဲ သတ်မှတ် လိုက်တယ်။ သူတို့အပြောအရ အိမ်ကစောပြီး ကြော်ငြာရင်လဲ ဝေးနေသေးတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားဘူးတဲ့။ ငှါးဖို့ တစ်လခွဲ လောက်အလိုမှ စ ကြော်ငြာမယ်ပြောပါတယ်။ (အဲဒီအချိန်က ၂လခွဲလောက် လိုသေးတာကိုး)
မဆွိတီတို့ အိမ်အကြောင်း စပြောရရင် ဒီအိမ်ကို ၀ယ်ကတည်းက ကြိုက်လွန်းလို့ အပို cash down တွေ အများကြီးပေးပြီး ၀ယ်ခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံးကြည့်တဲ့အိမ် ပထမဆုံး ၀ယ်ခဲ့တာပါ။ Country style home ခေါ်ပါသတဲ့။ ပထမအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က interior designer မှို့ သူ့အိမ်ကို သစ်သားတွေ အများကြီးသုံးပြီး လှအောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာပါ။ သုတ်တဲ့ ဆေးကအစ pattern လေးတွေနဲ့။ down light တွေကလဲ တစ်အိမ်လုံး တပ်ထားပါတယ်။ ညကျ မီးတွေ ဖွင့်လိုက်ရင် အိမ်က အခန်းအရောင်နဲ့ မီးရောင်နဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး လှပါတယ်။ မဆွိတီတို့ကလဲ တစ်သက်လုံး နေရမဲ့အိမ်ဆိုတော့ ပရိဘောဂတွေကို ကုတင်ကအစ solid wood တွေချည်းဝယ်ပြီး ကောင်းတာတွေ ထည့်ထားတာပါ။ တကယ်တော့ မဆွိတီ ဒီအိမ်လေးကို တော်တော်သံယျောဇဉ်ရှိပါတယ်။ အခုထားခဲ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ အင်မတန် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အိမ်ငှါးတော့လဲ အိမ်ငှါးကို ကိုယ်တောင်းတဲ့ rental fees ပေးနိူင်သူအပြင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေမဲ့သူကို အဓိက ရွေးချင်တာပါ။
( ကိုယ့်အ်ိမ်အကြောင်း ပြောရတာလဲ ကိုယ့်ငါးချဉ်လေး ကိုယ်ချဉ်ပါတယ်ဆို ကြွားသလိုဖြစ်နေပြီနော် ... သည်းညည်းခံကြပါ ပိတ်သတ်တို့ ...း)
ဒီလိုနဲ့ တစ်လလောက်စောင့်ပြီး အိမ်စပြဖို့ အချိန်ရောက်လာပါတယ်။ ပွဲစားအစ်မက ညနေ ၇နာရီလောက် ဖိလစ်ပင်းကောင်မလေးတွေ လာကြည့်မယ်တဲ့။ သူတို့က ၇ ယောက်နေမယ်။ ၂၄၀၀ ပေးမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ညနေလာကြည့်တော့ ကောင်မလေးတွေက တကယ့်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးတွေ။ စကားပြောတာက သိပ် polite ဖြစ်တယ်။ ပညာတတ်ဆန်တယ်။ သူတို့က အိမ်ကိုကြိုက်တယ်။ သူတို့အိမ်လိုသဘောထား သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဈေးဆစ်တယ်ဗျား။၂၃၀၀ ရမလားဘာညာ ဆိုတော့ မဆွိတီကလဲ ခုမှ ပထမဆုံး စပြတာ ခပ်တင်းတင်းပေါ့။ ၂၄၀၀ ကနေ မလျော့နိူ်င်။ နောက်ပြီး မဆွိတီတို့အိမ်က Mio home group plan က တစ်နှစ် လက်ကျန်ရှိသေးတော့ သူတို့က အဲဒါကိုလည်း ဆက်ယူပေးမယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားဦးမယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ (အဲဒီ plan ကို မသုံးပဲပြန်အပ်ရင် Singtel ကို early termination fees စလုံး ၄၀၀ -၅၀၀ လောက် လျော်ရမှာမှို့ပါ။)
နောက်နေ့ကျတော့ ပွဲစားအစ်မက ဖုန်းဆက်ပြီး ဖိလစ်ပင်းကောင်မလေးတွေဆို မဆိုးကြောင်း၊ ဖိလစ်ပင်းတွေ ဘယ်လိုသန့်ရှင်း သပ်ရပ်ကြောင်း ဆွယ်ပါလေရောဗျာ။ ကိုယ်ကလဲ Mio home plan အပါအ၀င် ၂၄၆၀ တစ်ပြားမှ မလျှော့။ အဓိကကတော့ လူအရမ်းများလို့ ဂျီးများနေတာလဲပါတယ်။ နောက်ပြီး မဆွိတီကလဲ စိတ်တစ်မျိုး။ သူများ အဲ့လို ဘလိုင်းကြီး အတင်းတွန်းတာမျိုးကို မကြိုက်ဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းပြချက်ရှိရမယ်လို့ စိတ်က သရိုးသရီဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ ဖိလစ်ပင်း ပထမ အသုတ်နဲ့ အဲ့ဒီအတိုင်း တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ (နောက်ပိုင်းတော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပွဲစားက မျိုးစုံ ဆက်တိုက်တွန်းပေမဲ့ လူများလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လုံးဝကို ငြင်းလိုက်ပါတော့တယ်။)
နောက်၂ရက်လောက်ကြာတော့ ပွဲစားအစ်မက သူတို့ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာလိုက်ပြီ။ အိန္ဒိယလူမျိုး တွေ(နောက်ပိုင်း ကုလားလို့ပဲရေးပါမယ်၊ အိန္ဒိယဆို ပြောရတာ ထောက်နေလို့ ) ခေါ်လိုက်ကြတာ ... ခေါ်လိုက်ကြတာ အများကြီးပဲ မဆွိရယ်တဲ့။ အမှန်က အိမ်ကို စငှါးကထဲက ပြောထားတာ၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပင်း၊ မလေးတရုတ် ပထမဦးစားပေးပေါ့။ ကုလားနဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေကိုတော့ ဒုတိယဦးစားပေးပဲထားတာ။ (racist လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါ။ ဈေးကွက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ သဘောအရ ပြောရတာပါ။) အဲဒီအစ်မက ဖုံးခေါ်ကထဲက လူတွေကို စစ်ထုတ်ပြီးမှ အိမ်ကိုပြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက ကုလားတွေ ခေါ်တာ အရမ်းများတယ်ပြောတော့ ကုလားဖြစ်လဲ မိသားစုနဲနဲဆိုရင်တော့ စဉ်းစားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ညကျတော့ ကုလားမိသားစု ၃ယောက်နေမဲ့သူရယ်၊ ဗမာ ကောင်လေး တစ်ဖွဲ့ရယ် လာကြည့်ကြတယ်။ ကုလားအမျိုးသားက လစာတော်တော်ကောင်းတဲ့သူမျိုး ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ မဆွိတီတို့နားက Jurong Island မှာ လုပ်တဲ့သူပါ။ လင်မယား၂ယောက်ရယ်၊ ၁၆ နှစ်အရွယ် သားတစ်ယောက်ရယ် နေမယ်၊ အိမ်ကိုတော့ ကြည့်ပြီး အတော်သဘောကျပုံ ရပါတယ်။ ကြည့်ပြီး ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ ပွဲစားနဲ့ပြောနေတာ။ ဒါပေမဲ့ ၂၂၀၀ ပဲ offer လုပ်ပါတယ်။ ဗမာကောင်လေးတွေကလဲ ၆ယောက်နေမယ် ၂၃၀၀ ပေးမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဧပြီ (၁)ရက်နေ့က စ ၀င်ချင်တာဆိုတော့ အဲဒီကောင်လေးတွေနဲ့ ဒီမှာတင် ကိစ္စပြတ်ပါရော။ နောက်နေ့ ပွဲစားအစ်မက ပြောတယ်။ သူ့ဆီကို အဲဒီကုလားရဲ့အေးဂျင့်က တောက်လျှောက်ဖုံးဆက်ပြီး ၂၂၀၀ နဲ့ ငှါးဖို့ချည်း ဇွတ်ပြောတော့တာပဲတဲ့။ သူ့ Client က အိမ်ကို တော်တော်သဘောကျလို့ ဒီလောက်ပေးတာတဲ့။ ပုံမှန်ဆို ၁၈၀၀ ပဲ ပေးတာတဲ့ဗျား။ ဒါပေမဲ့ ပွဲစားအစ်မက ၃ယောက်ထဲ လူနဲနဲလေးမှို့ ၂၃၀၀ နဲ့ ညှိပေးမယ်ဆိုတာတောင် သူတို့ကမပေးနိူင်လို့ အဲဒီမှာတင် ကိစ္စပြတ်ပါတယ်။
နောက် မဆွိတီ ရေးဖူးတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်မ မိသားစုတစ်ဖွဲ့နဲ့ ဖိလစ်ပင်းမလေးတွေ တစ်ဖွဲ့။ သူတို့က သူတိုအေးဂျင့်နဲ့သူတို့ လာတာ။ ၂ဖက်အေးဂျင့်နဲ့ အိမ်ကိုကြည့်ကြတာပေါ့။ သူတို့ဆီကနေ ဘာ offer မရပါဘူးလို့ အေးဂျင့်အစ်မက ပြောပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်ပတ်နေတော့ ကုလားမိသားစု ၃ယောက်နေမယ်ဆိုပြီး ကုလားမ ဖြူဖြူလေးတစ်ယောက်၊ သမီးလေးလက်ဆွဲပြီး ရောက်လာပြန်တယ်။ နာမည်က " ပန် " လို့ ပဲထားလိုက်ပါတော့။ သမီလေးက ၃နှစ်လောက်၊ ချောလိုက်တာဗျာ။ ကုလားဆိုပေမဲ့ အသားက ဖြူဖွေးနေတာ၊ ဘိုမရုပ်လေးလိုပဲ။ ပန်ကလဲ အိမ်ကိုကြည့်ပြီးပြီးချင်း သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်တောင်းတဲ့ ဈေးတော့ မပေးနိူင်ဘူး။ ၂၂၀၀ ပေးမယ်တဲ့။ ဒါတောင် သူက ကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပဲ။ သူတို့ ဘက်ဂျက်က ၂၀၀၀ ပဲရှိတာတဲ့။ ခုကွန်ဒိုမှာနေတာ ၃နှစ်ရှိပြီ၊ ၂၀၀၀ပဲ ပေးရသတဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ။ သူ့သမီးလေးနေမဲ့ကျောင်းက ဒီနားမှာမှို့ပြောင်းရမှာတဲ့။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဈေးမှ မပေးနိူင်တော့ ကိစ္စကမပြတ်ပဲ ပြန်သွားတယ်။
နောက်နေ့ ကျတော့ အေးဂျင့်က NTU မှာ ဒေါက်ထရိတ် (Doctorate) တက်နေတဲ့ တရုတ်ကျောင်းသား ၄ယောက် လာကြည့်မတဲ့။ ညနေ ၇နာရီ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်လည်းရောက်ရော အေးဂျင့်က သူတို့ အောက်မှာရောက်နေပြီဆို ဖုံးဆက်လာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဗျာ၊ အိမ်ရှေ့က ခေါင်းလောင်းသံကြားလို့ ထွက်ကြည့်လိုက်တာ၊ ဘယ်သူထင်ပါလဲ ပိတ်သတ်ကြီး။ ချိန်းလဲမထားပဲနဲ့ ရောက်လာတာ။ မနေ့က အိမ်လာကြည့်တဲ့ ကုလားမလေး ပန်တို့ သားအမိပါပဲဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း သမီးလေးလက်ဆွဲလို့။ အိမ်ပေါက်ဝမှာ။ ကိုယ်လဲ အံ့သြသွားတာပေါ့။ အိမ်တံခါးကို ဖွင့်ပေး၊ ဧည့်ခန်း ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ပြီး သူ စကားပြောလို့ရမလားဆို မဆွိတီကို ပြောပါရော။ သူ့ပုံစံက တကယ့်ကို serious ကိစ္စတစ်ခု လုပ်နေသလိုမျိုး။ ပြူးတူး၊ ပြာတာနဲ့။ ကိုယ်လဲ သိပ်နားမလည်တာနဲ့ အေးဂျင့်နဲ့ပဲ ပြောဖို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဒီအိမ်ကို သိပ်ကြိုက်တဲ့ အကြောင်း၊ သူ ၂၂၅၀ ပေးပါမယ်၊ ၅၀ တိုးပေးပါမဲ့အကြောင်း၊ သူ့ကို ငှါးဖို့အကြောင်း ပြောပါလေရော။ မဆွိတီကလဲ ၂၃၀၀ မရရင်တော့ မငှါးဘူး။ ဒါတောင် နင်တို့က လူနည်းလို့ ငါလျှော့ထားတာပေါ့။
အဲလိုနဲ့ ပြောနေကြတုံး အောက်က အေးဂျင့် ၂ယောက် အပေါ်တက်လာပါရော။ ရုတ်တရက်ကြီး ပန်တို့ သားအမိလဲတွေ့ရော အံ့သြသွားကြတယ်။ အဲဒီမှာအေးဂျင့်ကောင်လေးက လေသံမာမာနဲ့ နင် အိမ်ငှါးခလဲ ခုချိန်ထိ အိမ်ရှင်ကြိုက်တဲ့ဈေး မပေးပဲနဲ့ အိမ်ကိုခဏခဏ မလာပါနဲ့ ဆို ပြောပါလေရော။ ကြိုက်ရင် deposit ပေးဖို့၊ လက်မှတ်ထိုးဖို့ အေးဂျင့်ကောင်လေးနဲ့ စကားတွေ ဆက်ပြောကြပြန်တယ်။ နောက်ပိုင်း ပန်က ဆစ်ဒနီက သူ့ယောက်ျားက မဆွိတီဆီ ဖုံးဆက်ချင်လို့ ဖုံးနံပတ်တောင်းတာနဲ့ ပေးမလို့ ဒီက ဖုံးတောင် ကိုင်နေပြီ။ အေးဂျင့်ကောင်လေးက အစ်မ သူ့ဘက်က ဘာမှမသေချာပဲနဲ့ မပေးပါနဲ့ဆို အတင်းတားလို့ ကိုင်ထားတဲ့ဖုံးလေး အသာပြန်ချလိုက်ရတယ်။ ဘာတွေမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။ ပန်တို့ သားအမိလဲ မျက်စိပျက်၊ မျက်နှာပျက်နဲ့ ပြန်သွားကြတယ်ဗျာ။ ချိန်းထားတဲ့ ကုလား ဒေါက်တာ ၄ ယောက်ကတော့ မျှော်သာ မျှော်သည် ပေါ်မလာ ဇာတ်ခင်းသွားတယ်။ ညနေ၉နာရီမှဆို တစ်ခါ ထပ်ချိန်းပြီး နောက်ဆုံး appointment ပျက်သွားပါတော့တယ်။ (ပထမ တရုတ်ကနေ ဘယ်လိုကုလား ဖစ်တွားလဲ မဆွိတီ ခုထိ မသိပါဘူး ... အားနာလို့ မမေးပါဘူး ...)
နောက် အဲဒီ ပန်တို့ သားအမိပြန်သွားတော့ အေးဂျင့် ၂ ယောက်လုံးက မဆွိတီကို နားချပါရော။ ၂၂၅၀ နဲ့ မိသားစုက နဲနဲလေး။ ငှါးလိုက်ပါလားပေါ့။ မဆွိတီကလည်း စကြော်ငြာတော့ ၂၅၀၀ နဲ့ ၊ ခု၂၃၀၀ ဆိုတာ အများကြီးလျှော့ပြီးသွားပြီ။ တော်လောက်ပြီ၊ ထပ်တော့ မလျှော့တော့ဘူး။ အချိန်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ ထပ်ရှာကြတာပေါ့ဆို ပြောလိုက်တယ်။ နေ့ခင်းကျတော့ ရုတ်တရက်ကြီး၊ မနေ့က ပျက်သွားတဲ့ ဒေါက်ထရိတ် ကျောင်းသား ၄ယောက်လာမယ်ဆိုဖုံးဆက်ပြီး လာကြည့်ကြပြန်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အေးဂျင့်နဲ့လာတာ။ အေးဂျင့်ကလည်း ကမန်းကတန်းနဲ့ဗျ။ မြန်မြန် ထက်ထက် ကြည့်ကြပြီး ညနေ ၅ နာရီ အကြောင်းပြန်မယ်ဆို ပြန်သွားတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ၂၄၀၀ပေးမယ်ဆို ကိစ္စက ပြတ်ချင်နေပြီ။ ညနေ ၆နာရီ ပွဲစားအစ်မဆီကနေ SMS ၀င်လာတယ်။ အိပ်ရာ (ကုတင်) ၄ခုရှိလား။ ၂၄၀၀ နဲ့ ငှါးဖို့သေချာပြီလား၊ confirm လုပ်ပါတဲ့။ ကိုယ်က အိပ်ရာ ၄ခုလဲရှိတယ်။ ၂၄၀၀ သေချာတယ်ပေါ့။ အိမ်တည့်တော့မယ်ထင်နေတာ။
ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့မနက်အထိ သူတို့ဆီက ဘာသတင်းမှ ထပ်မရဘူး။ ဒါနဲ့ အတိုချုံးရရင် ကိုယ့်ဖက်က သူတို့လိုတဲ့ မေးတဲ့ အတိုင်း အားလုံးပြည့်စုံနေပါရက်နဲ့ ဘာလို့ offer မရလဲဆိုပြီး ပွဲစားအစ်မကို မဆွိတီက ရန်ထောင်ပါရော။ ဆိုးတယ်နော်။ လူကလဲ နဲနဲ စိတ်တိုနေပြီကိုး။ ဒီကိစ္စပြတ်ချင်နေပြီ။ လူက ဦးနှောက်ခြောက်နေပြီ။ ညနေ ၅နာရီ Black & White ပြောမယ် ဆိုပြီး နောက်နေ့ မနက်ထိ အကြောင်းမပြန်ပါလားပေါ့။ အေးဂျင့်တွေက ပွဲစားခ ၂ဖက်စလုံးရမှ သေချာငြိအောင် လုပ်ပေးတာလား။ ဟိုဖက်က အေးဂျင့်ပါရင် (cobroke ဖြစ်နေရင်) ပွဲခမရတော့ အလုပ်မဖြစ်အောင် ဖျက်ကြသလားပေါ့။ အဲလိုစိတ်ထဲ ဖြစ်သွားတာ။
အိမ်ကြည့်သူ စ လက်ခံကတည်းက ၃ပတ်ရှိပြီ။ အိမ်ကလဲ ကောင်းတယ်။ အဲကွန်းကအစ အသစ်လဲထားတာ ၆လပဲ ရှိသေးတယ်။ အိမ်ဆေးသုတ်ထားတာလဲ မကြာသေးဘူး။ ဈေးခေါ်လို့ ကောင်းမဲ့အိမ်မျိုး။ ဈေးကလဲ ၂၅၀၀ ကနေ ၂၃၀၀ ထိ လျှော့ပေးပြီးပြီ ။ ပြီးတော့ ပြောထားတဲ့ ဧပြီ ၂၀ရက်နေ့မှ မဟုတ်။ မေလ ၁ရက်နေ့ဝင်လည်း လက်ခံတယ် ။ ၁၀ရက်စာ လဲ အနာခံထားတယ်။ ဒီလောက် လျှော့ပေးတာမှ မတည့်သေးတော့ စိတ်က နဲနဲမရှည်ချင်တော့ဘူး။ အေးဂျင့်တွေ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ သူတို့ကို သိပ်မယုံချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတာဗျာ။
ဒါနဲ့ဦးခြိမ့်ကိုလဲ ဖုံးဆက်ပြီး အေးဂျင့်ကို ဖိအားပေးဖို့၊ အိမ်ကိုလာကြည့်တဲ့သူကလဲ တစ်ယောက်စ၊ ၂ယောက်စပဲ လာတဲ့အကြောင်း၊ လာတဲ့သူတွေကလဲ သူတို့ဖက်က ပွဲစားပါရင် offer မလုပ်ဘူးလို့ ပြောကြောင်း၊ သေချာကြော်ငြာပြီး open house ဆို လုပ်လိုက်ရင် လူများများလာကြည့်၊ ဒါမှ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးဖြတ်ကြ အဲလိုဖြစ်စေချင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ အချိန်ကလဲ သိပ်မကျန်တော့ဘူးကိုး။ ဦးခြိမ့်ကလဲ အေးဂျင့်ကို အိမ်အမြန်တည့်အောင်လုပ်ပေးပါရန် ဖိအားပေးဖုံးဆက်လိုက်တယ် ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနေ့ပဲ အေးဂျင့်ကောင်လေးက မဆွိတီကို ၂၂၅၀ပေးတဲ့ ကုလားမလေး ပန်ရဲ့ဖုံးနံပတ်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ဆက်ခိုင်း၊ ဈေးညှိခိုင်းပါတော့တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ အေးဂျင့်ကတဆင့် ပြောရတာပါ။ အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှါးတိုက်ရိုက်ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့မှ အေးဂျင့်ကောင်လေးက သူတို့ ပန် မိသားစုဆီက agent fees မယူကြောင်း ပန်က ၂၂၅၀ ပေးနိူင်ဖို့အရေး သူတို့ အေးဂျင့်ခ မယူပဲနဲ့ လျှော့ပေးခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ မဆွိတီလဲ အတော်အားနာသွားတယ်။ ကိုယ်က သူတို့ အေးဂျင့်ခ ၂ဖက်စလုံးရတဲ့သူမှ အဆင်ပြေအောင် ညှိပေးတယ်လို့ အထင်လွဲနေတာကိုး။ (အေးဂျင့်ခက တစ်နှစ်စာချုပ်အတွက် အိမ်ငှါးဆီက တစ်လငှါးခရဲ့ တစ်ဝက်၊ အိမ်ရှင်ဆီက တစ်ဝက် ယူရတာ ထုံးစံပါ၊ ၂နှစ်ဆိုရင် တစ်လစီ အပြည့်ယူပါတယ် ... စလုံးထုံးစံပါ)
ဒါနဲ့ ပန်ကို ဖုံးခေါ်ပြီး ညှိကြတော့ ၂၃၀၀ ပေးမယ် ဖြစ်သွားတယ်။ ပန်က စကားပြောတာလဲ အေးအေးလေး။ ၀တ်တာ၊ စားတာလဲ ကုလားရိုးရာ ဆာရီတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ မဂိုကုလားမတွေ ၀တ်တဲ့ ဘောင်းဘီပွပွရှည်ရှည်နဲ့။ တပတ်ကလေး လည်ပင်းပတ်လို့ နေပုံထိုင်ပုံ အင်မတန် ရိုးအေးပါတယ်။ တကယ့် အိမ်ရှင်မစတိုင်၊ အိမ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထားမယ်ဆိုတာ သိနေတော့ မဆွိတီ သူတို့ မိသားစု ၃ယောက်ကိုတော့ တကယ် သဘောကျပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဈေးညှိတဲ့ကိစ္စ၂ဦး၂ဖက်ပြေလည်ပြန်တော့ ပန်က deposit ကို ခုမပေးနိူင်သေးဘူးတဲ့ဗျား။ ထုံးစံက သဘောကျပြီဆို deposit တစ်လစာပေး စာချုပ်ချုပ်ကြပေါ့။ သူ့ယောက်ျားက အော်ဇီကို ခရီးထွက်နေလို့ ပြန်လာမှပဲ deposit ပေးမယ်တဲ့ဗျာ။ နောက်တစ်ပတ်စောင့်ရမှာပေါ့။
အေးဂျင့်ကောင်လေးကတော့ အစ်မ မယုံနဲ့တဲ့ ။ သူတို့လဲ အဲလိုကြုံဘူးတယ်။ နောက်ပိုင်း ယောက်ျား ပြန်လာတော့ ယောက်ျားက မကြိုက်ရင် အစ်မတို့ ပဲနင့်နာမှာတဲ့။ ရအောင် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းဆို ဟိုကလဲ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရဘူး။ ၂၃၀၀ ပေးစရာမလိုဘူး၊ သေချာချင်လို့ ၊ စတိ ၅၀၀ လောက်နဲ့ပဲ လက်မှတ်ထိုးပါဆိုတာကို ပြောမရတာဗျာ။ ကိုယ်ကလဲ သူ့ကို သဘောကျနေတော့ ကြံရာမရ၊ နင်အိမ်ကို တကယ်ယူမယ်၊ ၂၃၀၀ ပေးမယ်ဆို ငါ အိမ်ကို view လုပ်တာ ရပ်လိုက်တော့မယ်၊ SMS နဲ့ ကတိပေး၊ ၂၃၀၀ နဲ့ ယူပါမယ်၊ ယောက်ျားလာလဲ စိတ်မပြောင်းပါဘူးဆိုတာ ဆိုတော့ တကယ်ကို SMS ပို့တယ်ဗျာ။
နေ့ခင်းကျတော့ ပန်ကလဲ သူအပိုင်ပေါ့၊ ဒီအိမ်ကို သူရပြီးနေပြီဆိုပြီး ညနေအိမ်ထပ်လာခဲ့မယ် လုပ်ပါလေရော။ ထားခဲ့မဲ့ ပရိဘောဂတွေ လာကြည့်မယ်ဆိုတော့ မဆွိတီကလဲ ဘာရယ်မဟုတ် လာကြည့်ပေါ့။ အိမ်ပဲ့ပါသွားတာမှ မဟုတ်တာကို။ ဒီကြားထဲ အေးဂျင့်တွေကလဲ ကိုယ်တွေက ဖိအားပေးထားတော့ ပန် မိသားစုကို ယုံပြီး မစောင့်နိူင်ဘူး။ deposit မပေးပဲနဲ့ စောင့်တာ ထုံးစံမရှိဘူး။ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ညကျ open house လုပ်မယ်။ အိမ်ငှါး အဖွဲ့၈ဖွဲ့ လာကြည့်မယ်ဆို ချိန်းပါလေရော။
အေးဂျင့်တွေကလဲ ကတိဖျက်ရင် သူတို့ တာဝန်မယူနိူင်ဘူးဆို အိမ်ကို လူ ၈ဖွဲ့တောင် ညကျရင် လာကြည့်တော့မယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကြိုက်တာတွေ့ရင် ဈေးကောင်းရရင် ထပ်ရွေးပါတဲ့ဗျား။ ကိုယ်ကလဲ ပန်ကို လာခဲ့လို့ ပြောပြီးနေပြီ။ အိမ်ကိုလဲ view တာ ရပ်လိုက်ပြီလို့ ကတိကပေးပြီးသွားပြီ။ ညနေကျ ပန်နဲ့ အိမ်ကြည့်တဲ့သူတွေ ဘာဖြစ်ကြဦးမလဲ ငွေရောင် ပိတ်ကား ... အဲလေ ငွေရောင်ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဆက်ကြည့်ကြပါကုန်။
(ရေးရတာလဲ အတော်ညောင်းသွားပြီ။ ညနေ ဂျူဂျူးနဲ့ မဆွိတီတို့ မိသားစု စွယ်တော်ရိပ် သင်္ကြံန်ပွဲ သွားကြည့်ကြပါမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြော်ငြာဝင်ပါတယ်)
Posted by T T Sweet at 2:50 PM 18 comments: Links to this post
ယနေ့သည်ကား မဆွိတီ ကုမ္မဏီတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်း နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ထွက်စာတင်ပြီး ၂လတိတိ စောင့်လိုက်ရသည်။ ၈နှစ်ခွဲကြာ ဒရမ်မာကား ပြီးဆုံးခဲ့လေပြီ။ စိတ်ထဲမှာကား စာမေးပွဲပြီးတော့မည့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတာကလွဲ၍ ကျန်တာ ထူးထူးခြားခြား မရှိလှပြီ။ မနက်က ရုံးအလာ လမ်းကလေးမှာ ငါဒီလို လမ်းလေးကို လျှောက်ပြီး ရုံးလာရတာ ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ပါလား။ နောက်ဆို ဒီလမ်းလေးကနေ လျှောက်ဖို့မလိုတော့ပါလား ဆိုတာတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် တွေးမိသည်။ ရုံးမှာလဲ farewell တွေက ဟိုအဖွဲ့၊ဒီအဖွဲ့၊ အဖွဲ့မျိုးစုံနှင့် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကစ၍ တစ်ပတ်လုံးနီးပါးဆိုတော့ လူက နဲနဲပင် ၀ချင်သလိုပင်ဖြစ်နေသည်။ ကားကလဲ မရှိတော့၍ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်နေလို့သာ တော်တော့သည်။
လွှဲစရာရှ်ိသော အလုပ်များကိုလဲ မနက်ကတည်းက excel sheet မှာ သေချာပြင်ကာ link တွေနဲ့ ပြထားသည်မှို့ ဘယ်ဖိုင် ဘယ်နားရှိသည်ဆိုတာ ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါ။ မနက်က ကိုယ့်အလုပ်တွေကို ယာယီလွှဲယူမည့် Henry ကို CAD file အကြောင်းတော့ အသေးစိတ်သေချာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အစားထိုးရောက်မည့်သူက အမျိုးသားအင်ဂျင်နီယာသာဖြစ်သည်မှို့ သူတို့တွေက ဘော့စ်ကို အမျိုးသမီး အင်ဂျင်နီယာ ခန့်ပါဟုနောက်နေကြသည်။ မဆွိတီမရှိသည့်နောက်တွင် ME ဌာနသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တော့မည် ထင်သည်။
ဒီနေ့လဲ နောက်ဆုံးနေ့ ပလဲစင့်အတွက် ချောကလက် ထွက်ဝယ်ရသေးသည်။ မဆွိတီတို့ကုမဏီတွင် မည်သူက စတင်တီထွင်ခဲ့သည်မသိ၊ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ချောကလက်များ လိုက်ဝေကာ နှုတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ နှုတ်ဆက်ပြီးတော့စားပွဲပေါ်မှာ ချောကလက်လေး ၃-၄ခု တင်ကာ ပေးထားခဲ့သည်။ စားပွဲပေါ်က ချောကလက်လေးများက လူတစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွါခြင်း အထိမ်းအမှတ်။ မဆွိတီကား ၈နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အလုပ်ထွက်သွားသူပေါင်းစုံမှ ပေးသော ချောကလက်မျိူးစုံ စားခဲ့သည်။ ချောကလက် များစွာ စားခဲ့ဖူးသည်။ ယနေ့တော့ ချောကလက်ဝေမည့်သူ ၊ ချောကလက်လေးများ စားပွဲပေါ်တင်ပေးမည့်သူ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလေပြီတကား။
Posted by T T Sweet at 4:12 PM 20 comments: Links to this post
ထိုနေ့ညက ကျွန်မငိုသည်။ တစ်ညလုံး ငိုသည်။ ငိုလွန်းအားကြီး၍ မျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲ မို့မောက်နေသည်။ ရည်းစားဟောင်းက အသည်းခွဲသွားတာ ၆လကျော်ပြီ။ အသည်းကားကွဲ၍ မပြီးသေး။ မိုးရွာလျှင်လည်း ကျွန်မငိုသည်။ နေပူလျှင်လဲ ငိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘတ်စ်ကားစီးရင်း တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရကာ မျက်ရည်တွေ တွင်တွင်ကျတတ်သည်။
အဖွားကတော့ပြောသည်၊ သမီးရယ် ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကို ကိုယ်မသုံးတော့တဲ့ ပစ္စည်း အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ပစ်သလို ပစ်လိုက်ပါတော့ကွယ် တဲ့။ ခက်သည်က ကျွန်မ။ မေ့မရပါ။ ဘယ်လိုမှ မေ့မရသော အကြောင်းတရားများ ကြုံကြိုက်လျှင် ကျွန်မ ငိုသည်ချည်း။ တခါတရံလည်း ရှိုက်ခါရှိက်ခါ ငိုသည်။ တစ်ခါတရံလည်း ချောင်တစ်ချောင်မှာ အသံတိတ် မျက်ရည်ကျလျက်။
အဲဒီနေ့မနက်က မို့မောက်နေသော မျက်လုံးအစုံနှင့် အခန်းကို တံမျက်စည်းလှည်းနေစဉ် ပြတင်းပေါက်ကို အမှတ်တမဲ့ အကြည့်၊ အဆောင်ရှေ့လမ်းလေးဆီမှ လူ၂ယောက် ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်လာသည်ကို လှမ်းမြင်လိုက်သည်။ ၂ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကတော့ မြင်ဘူးသလိုရှိသည်ဟု ထင်နေတုံး " ဒေါ်xxx ဧည့်သည် " ဟု အဆောင်မှ ဦးလေးကြီးရဲ့ လှမ်းအော်သံ ကြားလိုက်ရသည်။ လှည်းလက်စ တံမျက်စည်းကို အသာချ၊ အနည်းငယ် သပ်ရပ်အောင်ပြင်ဆင်ရင်း အဆောင်ရှေ့တံခါးဝထံ ကျွန်မရောက်သွားသည်။
အဆောင်တံခါးပင်မဖွင့်၊ ကျွန်တော် မမိညို ရဲ့ မိတ်ဆွေပါခင်ဗျာ။ မမိညိုက စာတစ်စောင် လူကြုံပေးလိုက်လို့ လာပေးပါတယ်ဆိုကာ ဘာဂျာသံတံခါးအပေါက်မှ စာတစ်စောင် လှမ်ပေးလေသည်။ ပေးလာသူက မျက်မှန်နှင့် ပေမဲ့ ဘာဂျာတံခါးကြားမှ ကြည့်လိုက်သော သူ့မျက်လုံးအစုံကို မှတ်မိနေသည်။ ဒီမျက်နှာ၊ ဒီပုံစံမျိုး မြင်ဘူးသည်။ သေချာကို မြင်ဖူးခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ အစဖော်မရ။ သူကလဲ မိညိုရဲ့မိတ်ဆွေဆိုသည်မှအပ မိတ်ဆက်ခြင်းအလျှင်းမရှိ။ ပေးစရာရှိတာပေးကာ ပြန်လေသည်။ သူငယ်ချင်းကို လူကြုံပြန်ပေးလိုလျှင် သူနောက်၂ရက်နေ ထပ်လာခဲ့မည်။ အဆင်သင့်ပြင်ထားပါဟုဆိုသည်။
မမိညိုဆိုသည်ကား ကျွန်မနဲ့ ကျောင်းတုံးက အဆောင်နေစဉ် အခန်းဖော် သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပြီးတော့ ယိုးဒယားက နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ စကော်လာရကာ ကျောင်းတက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မိညိုရဲ့ စာကို ဖတ်ရတော့ ကျွန်မ နည်းနည်းတော့ အံ့သြမိသည်။ သူရေးထားသည်ကို အကြမ်းဖျဉ်းပြောရလျှင် ယခုစာယူလာပေးသူကား မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။ (အမှန်က ကျွန်မတို့နှင့် မေဂျာတူ အတန်း ၂တန်းကြီးသော အကိုကြီး၊ ကျောင်းက အသင်းအပင်းကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ နေရာတကာ ပါလွန်း၍ မြင်ဖူးနေခြင်းဖြစ်ပါသည် ) ကျောင်းတုံးက ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေ စုရိုက်ထားသောပုံကို ပြမိသည်မှအစ ကျွန်မကို သဘောကျကာ သူငယ်ချင်းကို အောင်သွယ်ပေးရန် နားပူသည်ဆိုသည်။ အောင်သွယ်ပေးပါမည့်အကြောင်း သူငယ်ချင်းက မနက်တိုင်း ဘရိတ်ဖတ်စ် ဘယ်နှစ်ရက်ဆိုလားမသိ ကျွေးခိုင်းကာ သဘောတူညီမှု ရခဲ့သည်ဆိုသည်။ အတော်ဆိုးသည့်သူငယ်ချင်း။
နောက်၂ရက်နေတော့ ကျွန်မလဲ မိညိုအတွက် လက်ဆောင် အကျီလေးတစ်ထည်ရယ်၊ စာလေးတစ်စောင်ရေးကာ အသင့်စောင့်နေသည်။ အဲသည်နေ့က ကျွန်မလဲ အိမ်ပြန်စရာရှိသည်နှင့် ပေးစရာရှိတာပေးပြီး အိမ်တစ်ခါတည်း ပြန်မည်ဆိုကာ စောင့်နေခဲ့သည်။ သူရောက်လာတော့ တော်တော်နောက်ကျနေပြီ။ အဖော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် အတူ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆောင်ရှေ့က ခုံလေးမှာပင် ကျွန်မတို့ စကားအနည်းငယ်ပြောဖြစ်သည်။ စကားစမြည်ပြောနေရင်း သူ့ပုံစံက အတွေ့အကြုံမရှိသော လူပျိုကြီးတစ်ယောက် ရှက်နေသလိုမျိုး အယောင်ယောင်အမှားမှား ရှက်ကိုးရှက်ကန်းပုံဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မသည်ကား ထင်ထားသည်ထက် များစွာအိနြေ္ဒရနေသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း အလျှင်းမရှိ။ စကားကို အမှားအယွင်းမရှိ၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ပြောနေသည်။
သူငယ်ချင်းထံရေးသောစာတွင် ကျွန်မအသည်းကွဲခဲ့တာ၊ ရည်းစားရှိဖူးတာ သူသိရဲ့လား အစရှိကာ၊ ခံစားခဲ့ရသည်၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို သူငယ်ချင်းထံ ရင်ဖွင့်သည်။ မိညိုထံမှ Life is going on, don't give up my friend, keep on အစရှိသော အားပေးစာများနှင့်အတူ ကျွန်မလည်း အနည်းငယ် အားရှိလာသည်။ နောက်ပိုင်း သူ့ထံမှ စာလေးများလည်း တစ်ပတ်တစ်ခါဆိုသလို မှန်မှန်ရောက်လာသည်။ သူ့လက်ရေးများက လက်ရေးပိုင်ရှင်နှင့် ဆန့်ကျင်စွာ လှလွန်းလှပါတကား။ ထိုစဉ်က ကျွန်မတို့ ဋ္ဌာနနှင့် ဆရာမဆောင် အလွန်နီးရာ စာရောက်လာလျှင် ဋ္ဌာနက စာရေးမက ဖုံးဆက်ခါ လာယူခိုင်းလေ့ရှိသည်။ အဆောင်သို့ ဖုံးလာလျှင် သူငယ်ချင်းများက စ၍ နောက်၍ မဆုံးတော့ပြီ။
စာလေးတွေရောက်လာတော့ ကျွန်မလဲ စာပြန်ရေးဖြစ်ပါသည်။ စာများရေးရင်း၊ ပြန်ရင်းဖြင့် အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းများကို အနည်းငယ်မေ့ပျောက်ကာ ကျွန်မဝေဒနာများ အတော်သက်သာလာသည်။ သူငယ်ချင်းကို အလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ စာများရေးရင်း၊ ပြန်ရင်းဖြင့် စာရေးသူ သူ့ကို သံယျောဇဉ်လိုလို ၊ သတိပဲရသလိုလို စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာ အချစ်လား။ စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါ။ စာများ အပြန်အလှန်ရေးရင်းဖြင့် ၆လ၊ ၇လ လ ကြာသွားပြန်သည်။ တစ်ရက်တော့ စာထဲမှာ သူကျွန်မကို သံယျောဇဉ်ရှိသည့်အကြောင်း၊ ချစ်နေသည့်အကြောင်း ဖွင့်ပြောလာသည်။ ကျွန်မကတော့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်နေသည်။ ကျွန်မ စဉ်းစားရဦးမည်။ အပြင်မှာ တစ်ခါ၊၂ခါလောက်တွေ့ဖူးသူကို ကျွန်မဘယ်လို ပြောရမည်လဲ။
တစ်ရက် သူ့အိမ်က အရေးတကြီးကိစ္စနှင့် မြန်မာပြည်သို့ သူခဏပြန်လာမည်ဆိုသည်။ သူ့အိမ်ကအပြန် ကျွန်မဆီဝင်မည်တဲ့။ စာချင်းဖြင့် အတန်ကြာ ရင်းနှီးသံယျောဇဉ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ကျွန်မလဲသူ့ကို တွေ့ချင်ပါသည်။ စကားတွေ ပြောချင်နေမိပါသည်။ အဲဒီနေ့က ဆိုင်ကယ်သံ တဖုတ်ဖုတ်ကြားတော့ သူကျွန်မတို့ ဋ္ဌာနနား ဆိုင်ကယ်နှင့်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထံမှ ဆိုင်ကယ်ငှါးလာခြင်းဖြစ်မည်။ သူနှင့် နွေးအေးမှာ သွားထိုင်ကြသည်။ စကားပြောကြသည်။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းသူဘ၀က drawing ခန်း 7/1-1 နားက လှေခါးထစ်တွေမှာထိုင် စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြသည်။ စကားများကား ပြောမကုန်ကြ။
ဒီကြားထဲ အဆောင်မှ သူငယ်ချင်းအချို့က သူနှင့်ကျွန်မကို သဘောမတူကြပြန်။ သူ့မှာ ဘာအပြစ်ရှိသည်၊ ညာအပြစ်ရှိ်သည်ဆိုကာ ဖျက်လေသည်။ ကျွန်မကား ရှေ့သို့ တိုးရမည်လား၊ နောက်ဆုတ်ရမည်လား ဇဝေဇ၀ါ။ ကျွန်မသူ့ကိုတွေ့တော့ ပြောမိသည်။ သူသည်ကား အလွန်စိတ်ဓာတ်ပြတ်သား ခိုင်မာသော သူပေတကား။ လက်တွေ့ကျသော သူပေတကား။ ဘယ်သူ သူ့အကြောင်းဘာပြောပြော သူဂရုမစိုက်ပါတဲ့။ ငါ့ညီမအကြောင်းတွေပြောတာလဲ သူဂရုမစိုက်ပါတဲ့။ လောလောဆယ်ဘ၀ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါသည်တဲ့။ လူများတွေပြောတာ ညီမလဲ ဂရုမစိုက်ပါနှင့်တဲ့။ ခု၂ယောက်ချင်း တွေ့နေပြီပဲ။ မသိတာရှိမေး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားချ။ မည်သူ့မှလဲ သူကောင်းသည်၊ ဆိုးသည် မပြော။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ် ဆိုလေသတည်း။ ကျွန်မသူ့ထံမှာ ခိုင်ကျဉ်သောစိတ်ဓာတ် တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်နှင့် အတူ စိတ်ထဲမှာ သူ့အရိပ်အောက်မှာသာဆိုလျင် ကျွန်မအား အကာအကွယ်ပေးမည့်သူတစ်ယောက် ရှိနေသလို လုံခြုံစိတ်ချသလို ဖြစ်သွားသည်။
နောက်နေ့မနက် သူ့မွေးနေ့မှာ သူ့သူငယ်ချင်း ကားစုတ်လေးမောင်းကာ ရွှေတိဂုံဘုရား အတူဖူးရအောင်ဆိုကာ လာခေါ်ပြန်သည်။ ကားစုတ်လေးကို မမောင်းတတ်မောင်းတတ်နှင့်မောင်းကာ ကက်ဆက် အစုတ်လေးဖွင့်ကာ ကျွန်မတို့ သွားခဲ့ကြသည်။ ဖွင့်ထားသည့်သီချင်းက Love song collection ထဲ က ဖြစ်မည်ထင်သည်။ " More than words" ဆိုသည့်သီချင်း။ ကားကသာစုတ်သည်။ ကက်ဆက်ကသာ စုတ်သည်။ ကျွန်မတို့ နှလုံးသားများ သစ်လွင် နုပျိုခဲ့ကြပါကလား။ ဘုရားပေါ် လှေခါးတွေ ရေကာ တက်ကြပြန်သည်။ စိတ်ထဲမှာကား သူ့ကို ချစ်မိပြီလား၊ မသေချာ။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ရှိခဲ့သည်ကား သူနဲ့အတူဆိုလျင် ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ပြတ်သား ခိုင်ကျင်စွာဖြင့် စောင့်ရှောက်မည့်သူတစ်ယောက်အနေနှင့်၊ သူအနားမှာရှိလျင် ကျွန်မလုံခြုံစိတ်ချနေသည်။ ဒါပဲသိသည်။
(အန်တီသက်ဝေက အချစ်အကြောင်းဆို၍ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ရေးလိုက်ပါပြီ၊ ရှေ့ဆက်ရေးဖို့ မတတ်တော့ပြီ။ ကျေနပ်နိူင်ပါစေ။)
Posted by T T Sweet at 1:57 PM 45 comments: Links to this post